Flint: Mobile mentkwụ Processgwọ Nhazi Iji Igwefoto | Martech Zone
Flint: Mobile mentkwụ Processgwọ Nhazi Iji Igwefoto
Mgbe ụfọdụ, ọ bụ obere ihe na-eme ka anyị nwee uche. Mgbe onye ọ bụla gbara ọsọ iji mee ndị na-agụ akwụkwọ na dongles maka ngwaọrụ mkpanaka… folks na ọmụ na-eche ihe kpatara na anyị ejighị igwefoto naanị. Usoro ahụ na - achọpụta ma nyefee nọmba kaadị ahụ site na igwefoto mana ọ naghị echekwa foto mpaghara nke nọmba ahụ.
Enweghị Card Reader - Naanị jiri ngwa Flint iji lelee kaadị ahụ karịa iji swiping ya site na onye na-agụ kaadị ma ọ bụ dongle. Keyed ntinye mode na-akwado.
Mbido Na-enweghị Nsogbu - Ina malitere na nkeji. FREE APP, ọ dịghị echere iji nweta onye na-agụ ya na mail. Ọ dịghị ahịa akaụntụ hassles ma ọ bụ n'ihu-akwụ ụgwọ.
Transgwọ azụmahịa dị ala - Fegwọ maka azụmaahịa kaadị debit bụ 1.95% + $ 0.20 kwa ụgwọ. Gwọ maka kaadị akwụmụgwọ bụ 2.95% + $ 0.20. Enweghị nkwa kwa ọnwa.
Socialzụ ahịa Ahịa Dị Mfe - Biputa nkwenye na Facebook. Nyocha na nkwenye na-akpaghị aka na-egosi na ibe onye ahịa gị yana ibe gị.
Tags: nhazi kaadị akwụmụgwọọmụngwa ahianhazi ịkwụ ụgwọ ekwentịugwo ugwo